[Leaked] Xiaomi Mi6Shows Dual Camera Setup And Quad HD 2K OLED Display » Than Dana HomeAbout Me
HomeNews[News] Xiaomi Launches First USB Type C Earphones May 21, 2017 2030CommentsBy: Than DanaXiaomi ဟာ May 19 ရက်နေ့မှာပဲ 3.5mm Audio jack port မပါဝင်တဲ့ Mi6ကဲ့သို့ Devices များမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် USB Type C အသုံးပြုထားတဲ့Read More...[News] Xiaomi Mi6Comes With 6GB RAM, Snapdragon 835, Dual Camera Apr 19, 2017 3550CommentsBy: Than DanaXiaomi ဟာ သူ့ရဲ့ New product ဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi6flagship device ကို ဒီကနေ့ April 19 မှာပဲမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Mi 6Read More...[News] Xiaomi Launches Mi Panoramic 360 Degree Camera With Wi-Fi Connectivity Apr 6, 2017 2300CommentsBy: Than DanaXiaomi ဟာ Mi Panoramic 360 Degree Camera ကို ဒီကနေ့ပဲ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း Mi Panoramic 360 Degree Camera နဲ့အတူ Videos တွေနဲ့Read More...Xiaomi Mi6Will Launch This April Confirmed By CEO Lei Jun Apr 6, 2017 1880CommentsBy: Than DanaXiaomi CEO ဖြစ်သူ Lei Jun ဟာ ယခုလ ဧပြီလအတွင်းမှာပဲ Xiaomi Mi Series ရဲ့ Model အသစ်ဖြစ်တဲ့ Mi6ကို မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်Read More...[News] Mi Pad 3: MTK Hexa-core CPU, 6600mAh Battery with 7th Mi Anniversary Apr 5, 2017 3630CommentsBy: Than DanaXiaomi ကို Lei Jun နဲ့အတူ Co-founder (၈) ဦးတို့ဟာ April 6, 2010 မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုဆိုရင် (၇) နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလတခုအတွင်း အောင်မြင်မှုတွေကိုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့် မနက်ဖြန်မှာRead More...ReviewsForumAbout MeContact Me Home » Xiaomi » [Leaked] Xiaomi Mi6Shows Dual Camera Setup And Quad HD 2K OLED Display
[Leaked] Xiaomi Mi6Shows Dual Camera Setup And Quad HD 2K OLED DisplayIn XiaomiXiaomi ရဲ့ Mi series မှာ ထပ်မံထွက်ရှိလာမည့် Mi6နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး Weibo မှာပေါက်ကြားနေတဲ့ သတင်းတချို့ရှိပါတယ်။ ၎င်း သတင်းများမှ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့သတင်းစကားတချို့ကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။Mi6ရဲ့ Camera ကို Dual Camera တပ်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး Mi Note2ကဲ့သို့ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Mi6ရဲ့ နောက်ဖက်မျက်နှာပြင် နှစ်ဖက်စလုံးမှာ Curved ပုံစံမျိုးနဲ့ ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ ပေါက်ကြားထားတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ ဒါပေမယ်လို့ Xiaomi အနေနဲ့ကတော့ Mi6နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး မည်သည့်တရားဝင်သတင်းမှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ တချို့ကလည်း Mi6မှာအသုံးပြုမည့် Snapdragon 835 SoC လုံလောက်တဲ့အရေအတွက်မရရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် စတင်မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက် အချိန်နှောင့်နှေးမှုဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ကြားသိရပါတယ်။ပေါက်ကြားလာတဲ့သတင်းများအရ Mi6ရဲ့ Display ကို Premium version မှာ Quad HD 2K OLED Display ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး Mi Note2ကဲ့သို့ Dual Curved Edges ပုံစံဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ Premium version မှာ RAM 6GB + ROM 256GB ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Standard version မှာတော့ RAM 4GB + ROM 64GB ရှိမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
Topics: Dual Camera Leaked Mi6Quad HD 2K OLED
MIUI9to HaveaLighter and Simpler ROM. What Are Your Thoughts?You may also read![News] Xiaomi Launches First USB Type C Earphones May 21, 2017 2030CommentsBy: Than DanaXiaomi ဟာ May 19 ရက်နေ့မှာပဲ 3.5mm Audio jack port မပါဝင်တဲ့ Mi6ကဲ့သို့ Devices များမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် USB Type C အသုံးပြုထားတဲ့Read More...[News] Xiaomi Mi6Comes With 6GB RAM, Snapdragon 835, Dual Camera Apr 19, 2017 3550CommentsBy: Than DanaXiaomi ဟာ သူ့ရဲ့ New product ဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi6flagship device ကို ဒီကနေ့ April 19 မှာပဲမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Mi 6Read More...[News] Xiaomi Launches Mi Panoramic 360 Degree Camera With Wi-Fi Connectivity Apr 6, 2017 2300CommentsBy: Than DanaXiaomi ဟာ Mi Panoramic 360 Degree Camera ကို ဒီကနေ့ပဲ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း Mi Panoramic 360 Degree Camera နဲ့အတူ Videos တွေနဲ့Read More...
Site SidebarRecent Posts[News] Xiaomi Launches First USB Type C Earphones May 21, 2017 - 0[News] Xiaomi Mi6Comes With 6GB RAM, Snapdragon 835, Dual Camera April 19, 2017 - 0[News] Xiaomi Launches Mi Panoramic 360 Degree Camera With Wi-Fi Connectivity April 6, 2017 - 0Xiaomi Mi6Will Launch This April Confirmed By CEO Lei Jun April 6, 2017 - 0[News] Mi Pad 3: MTK Hexa-core CPU, 6600mAh Battery with 7th Mi Anniversary April 5, 2017 - 0
»Post List[News] Xiaomi Launches First USB Type C Earphones May 21, 2017 - 0[News] Xiaomi Mi6Comes With 6GB RAM, Snapdragon 835, Dual Camera April 19, 2017 - 0[News] Xiaomi Launches Mi Panoramic 360 Degree Camera With Wi-Fi Connectivity April 6, 2017 - 0May 2017MTWTFSS« Apr 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 © 2017 Than Dana. All Rights Reserved.
HomeNews[News] Xiaomi Launches First USB Type C Earphones May 21, 2017 2030CommentsBy: Than DanaXiaomi ဟာ May 19 ရက်နေ့မှာပဲ 3.5mm Audio jack port မပါဝင်တဲ့ Mi6ကဲ့သို့ Devices များမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် USB Type C အသုံးပြုထားတဲ့Read More...[News] Xiaomi Mi6Comes With 6GB RAM, Snapdragon 835, Dual Camera Apr 19, 2017 3550CommentsBy: Than DanaXiaomi ဟာ သူ့ရဲ့ New product ဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi6flagship device ကို ဒီကနေ့ April 19 မှာပဲမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Mi 6Read More...[News] Xiaomi Launches Mi Panoramic 360 Degree Camera With Wi-Fi Connectivity Apr 6, 2017 2300CommentsBy: Than DanaXiaomi ဟာ Mi Panoramic 360 Degree Camera ကို ဒီကနေ့ပဲ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း Mi Panoramic 360 Degree Camera နဲ့အတူ Videos တွေနဲ့Read More...Xiaomi Mi6Will Launch This April Confirmed By CEO Lei Jun Apr 6, 2017 1880CommentsBy: Than DanaXiaomi CEO ဖြစ်သူ Lei Jun ဟာ ယခုလ ဧပြီလအတွင်းမှာပဲ Xiaomi Mi Series ရဲ့ Model အသစ်ဖြစ်တဲ့ Mi6ကို မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်Read More...[News] Mi Pad 3: MTK Hexa-core CPU, 6600mAh Battery with 7th Mi Anniversary Apr 5, 2017 3630CommentsBy: Than DanaXiaomi ကို Lei Jun နဲ့အတူ Co-founder (၈) ဦးတို့ဟာ April 6, 2010 မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုဆိုရင် (၇) နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလတခုအတွင်း အောင်မြင်မှုတွေကိုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့် မနက်ဖြန်မှာRead More...ReviewsForumAbout MeContact Me Download Manager